के तपाईं पनि कम्प्युटर रिफ्रेश गर्नुहुन्छ ? यो खबर अवश्य पढ्नुहोस् | Ekhabar Nepal
लायन्स विशेष असार २९ २०७४ बीबीसी
असार २९,। के तपाईं पनि डेस्कटप वा ल्यापटप खोल्ने बित्तिकै रिफ्रेश गर्न सुरु गर्नुहुन्छ ? यस्तो बानी धेरैको हुन्छ जो माउसलाई राइट क्लिक र रिफ्रेश गर्न सुरु गर्छन् ।
थुप्रै मानिसहरु लगातार यसो गर्छन् । तर के तपाईंले कहिले सोच्नुभएको छ, रिफ्रेश गर्दा केही असर हुन्छ कि हुँदैन ।
१० मध्ये ९ विन्डो प्रयोगकर्ता अत्यधिक रिफ्रेश गर्ने गर्दछन् । थुप्रैले रिफ्रेश गर्न आवश्यक भएपछि मात्र गर्दछन् तर धेरैजसो मानिसलाई रिफ्रेश गर्दा के हुन्छ, त्यसबारे थाहा नै हुँदैन ।
कसैले त रिफ्रेश देखासिकीकै भरमा पनि गर्ने गर्दछन् । केही मानिसलाई रिफ्रेश गर्दा यसले र्याम रिफ्रेश भइरहेको बुझ्छन् तर कसैलाई लाग्छ कि यसले कम्प्युटर फास्ट चल्ने पनि बताउँछन् ।
रिफ्रेश टूल डेस्कटपको आइकनलाई रि–डिस्प्ले गर्नका लागि बनाइएको हो । यदि तपाईंले डेस्कटपको आइकनमा केही परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने त्यो तत्काल देखिँदैन । यस्तोमा जब रिफ्रेश गर्नुहुन्छ भने सबै आयकन डेस्कटपमा देखिन्छ ।
यदि तपाईंको डेस्कटपमा आइकन छ भने यसलाई अल्फाबेटिकल्ली सेट गर्न सक्नुहुन्छ । सेट गरेपछि यदि कुनै नयाँ आइकन जोड्नुहुन्छ भने त्यो सबैभन्दा तल आउँछ । यस्तोमा जब तपाईं रिफ्रेश गर्नुहुन्छ भने नयाँ आइकन पनि त्यो क्रममा सेट हुने गर्दछ । यसका साथै रिफ्रेशको कुनै काम छैन ।
विन्डो क्लबका अनुसार रिफ्रेश गरिरहने मानिसहरु कम्पल्सिभ डिसअर्डरबाट पीडित हुन्छन् । यस्ता मानिसहरु नचाहिने कुराको जाँच गरिरहन्छन् । यो बानी साधारण मानिसहरुमा मात्र नभई कम्प्युटर इन्जिनियरमा पनि हुन्छ । थुप्रै इन्जिनियर ँछ बटनमा मोहित हुने गर्दछन् । विन्डो क्लबका अनुसार यो अबुझपनबाहेक केही होइन र यस्तो बानीलाई समाप्त गर्न आवश्यक छ ।